မြန်မာ့ စီးပွားရေး ပိုပြီး တော့ နှေးကွေးလာ နိုင် | The FNG
မြန်မာ့ စီးပွားရေး ပိုပြီး တော့ နှေးကွေးလာ နိုင်
October 24, 2016 · by 21 South News	· in News.	·
စစ်ပွဲ တွေ ၊ မတည် ငြိမ် မှု တွေ နဲ့သဘာဝ ဘေး အန္တရာယ် ကြောင့် မြန်မာ့ စီးပွား ရေး တိုးတက် မှု နှုန်း ဟာ ပို ပြီး နှေးကွေး လာ နိုင် တဲ့ သဘော ရှိ နေ
ကြောင်း စီးပွား တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဟောင်း တစ် ဦး က FNG ကို ပြော ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရ လက်ထက် အတွင်း မှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြုပ် နှံ မှု တွေ ၀င် ရေက် ခဲ့ ပေမယ့် အလုပ် အကိုင် နေရာ အများ အပြား ကို မဖန် တီး ပေး နိုင် ခဲ့ တာ ကြောင့် အရွယ် ရောက် လူငယ် ထက် ၀က် ကျော် လောက် ဟာ လစာ ၀င်ငွေ လုံး ၀ မရှိ တဲ့ အင်အား စု လို ဖြစ် နေတာ စီးပွား ရေး တိုး တက် မှု နှုန်း ပို ပြီး နှေးကွေး စေ နိုင် တယ် လို့သူ က ပြော ပါတယ်။
ရန်ကုန် မြို့က အထည် ချုပ် စက်ရုံ ပိုင် ရှင် တစ်ဦး က တော့ ငွေကြေး ဖောင်းပွား မှု နှုန်း ကို NLD အစိုးရ လက် ထက် မှာ မထိမ်း ချုပ် နိုင် တဲ့ အပြင် ပို ဆိုးလာ တယ်။
လျှပ် စစ်မီး မမှန် တော့ တချို့လုပ် ငန်း တွေ မှာ နိုင်ငံ ခြား က အမှာ စာ အတိုင်း လုပ် မပေး နိုင်တာ တွေ ရှိ တယ်။ အဲဒီ တော့ ထပ်မှာ ဖို့တွေ မလုပ် တော့ ဘူး လို့ပြော ပါတယ်။
NLD အစိုးရ လက်ထက် မှာ အရင် အစိုးရ လက်ထက် က လို ပဲ အလုပ် အကိုင် သစ် တွေ ကို မဖန် တီး ပေး နိုင် ဘူး လို့မန္တလေး မြို့က လူငယ် တစ် ဦး က ဖွင့် ဟ ပါတယ်။
” အရင် အစိုး ရ လိုပဲ၊ ဘွဲ့ရ ပြီး လည်း အလုပ် ရ ဖို့မလွယ် ဖူး ” လို့ပြော ပါတယ်။
နိုင်ငံ ခြား ရင်း နှီး မြုပ် နှံ မှု တွေ မှာ စက်ရုံ ၊ ဟိုတယ် တို့လို့လုပ် သား အင်အား အများ အပြား ခန့် ထား နိုင် တဲ့ ရင်းနှီး မြုပ် နှံ မှု တွေ အ၀င် နည်းတာ၊ နည်း ပညာ ကုမ္ပဏီ ကြီး တွေ နဲ့အကြီး စား စက်မှု လုပ်ငန်း ကြီး တွေ အလုံး အရင်း နဲ့မြန်မာ ပြည်ကို ၀င်ရောက် မှု မရှိ သေးကြောင်း ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ် သတင်း လွှာ မှာ ဖော် ပြထား ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စီးပွား ရေး တိုးတက် မှု နှုန်း တန့်နေ တာ ရယ်၊ IMF က ဗြိတိန် ငွေ
ကြေး နယ်ပယ် ကို သတိပေးထား ချက် နဲ့တရုတ် စီးပွား ရေးကျတာ တွေ ဟာ မြန်မာ ကို ရိုက် ခတ် မှု ရှိ တယ်။ တစ် နှစ် အတွင်း မှာ တော့စီးပွား ရေး တိုး တက် လာ ဖို့မမြင် သေးဘူး လို့စီးပွား တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ ဟောင်း က ပြော ပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ကို အမေရိကန် က အရေးယူ ပိတ် ဆို့ထား မှု ဖယ် ရှား လိုက် တဲ့ အခါ မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ပြည်ပ က ရင်းနှီး မြုပ် နှံ မှု တွေ ၀င် ရောက် လာ မှာ ထက် မြန်မာ ပြည် ထဲ က လုပ်ငန်း ရှင် တွေ ဟာ ငွေ ထုပ် ပိုက် ပြီး အမေရိကန် ၊ ဥရော ပ လို နိုင်ငံ တွေ ကို ထွက် သွား မယ့် သဘော ရှိ တယ် လို့သူ က ထပ်
← မိုဆူလ် မြို့ သိမ်း တိုက်ပွဲ စပြီ
Is genocide unfolding in Myanmar? →